Wasaarada Dekadaha Puntland oo ka warbixisay Dabkii kacay markab ku xirnaa Dekada – SBC
Wasaarada Dekadaha Puntland oo ka warbixisay Dabkii kacay markab ku xirnaa Dekada
Posted by Webmaster on Agoosto 24, 2012 Comments
Wasaarada dekedaha iyo gaadiidka bada ee dowlada puntland ayaa maanta ka warbixisay markab ku gubtay dekeda boosaaso habeenimadii xalay.
Wasiirka wasaarada dekedaha gaadiidka bada iyo la dagaalanka kooxaha burcad badeeda Eng Saciid Maxed Raage oo maanta shir saxaafadeed ku qabtay xafiiskiisa magaalada boosaaso ayaa sheegay markabkaasi gubtay in uu ahaa markab kaluumaysi kaasi oo beeniyay markabkaasi in uu siday shidaal Markii uu dabku qabsanayay.
Eng Saciid ayaa sheegay In markabka lagu sameynayay Gudaha Dekada islamarkaasina uu markabkan Uu maalmo ka hor keenay Shidaal iyo Shixnad ganacsig dekada ka dib markii u ubaxayna uu soo ciladoobay isaga oo sheegay in Markabka intii Karaankooda ah ay ku dalaaleen inay damiyaan Balse ay suurta gali weyday isaga oo taas u sabab uga dhigay in Markabka Gubtay uu ahaa Nooca loo yaqaan Fiber Glass kaasi oo Dabka hadii uu qabsado aan la damin Karin sida uu wasiir Raage Hadalka u dhigay.
Waxaa sidoo kale uu wasiirku uu sheegay in kooxaha dabdamiska ay dadaaleen awood kastana ay isugu geeyeen si ay u damiyaan balse ay xag alle ka qornayd in uu markabkaasi gubto inkastoo uu wasiirku ku amaanay dadaalka ay sameeyeen kooxaha dabdamiska iyo shaqaalaha dekeda oo markaasi ay ku badbaadiyeen gaadiidkii kale iyo agabyada dekeda oo taasina ay noqon karto dadaal dheeraad ah.
Dhinaca kale wasiirka Dekadaha Puntland Saciid Maxed Raage ku dhaliilay ganacsatada inay Ka gaabiyeen ka taxadarka Khataraha ka dhalan kara Ganacsigooda iyo Gadiidkooda waxaana uu sheegay in Taas looga Baahan yahay in Gadiidkooda ay ku rakibaan Dab damisyo yaryar oo lagu damin karo Bilowga Dabka.
Wasaarada Dekadaha Puntland ayaa Sheegtay in Meel wanaagsan ay u mareyso Qorshayaal ay ku sameyneyso Dab damis lagu samatabixiyo Hadii uu dab ka kaco Gadiidka Dekada Yimaada.